Ubuhle Nobubi Bomkhankaso We-imeyili wokukhetha ukungena kabili | Martech Zone
Ubuhle Nobubi Bomkhankaso We-imeyili Wokungena Okubili
NgoMsombuluko, Agasti 17, 2015 NgeSonto, Agasti 16, 2015 UKylie Ora Lobell
Amakhasimende awanaso isineke sokuhlela amabhokisi wokungenayo aminyene. Bafakwa imiyalezo yokuthengisa nsuku zonke, iningi labo abangazange babhalisele yona kwasekuqaleni.
Ngokwe-International Telecommunication Union, amaphesenti angama-80 omthamo we-imeyili womhlaba wonke ingahlukaniswa njengogaxekile. Ngokwengeziwe, isilinganiso esivulekile se-imeyili phakathi kwazo zonke izimboni iwela phakathi kwamaphesenti ayi-19 kuye kwangama-25, okusho ukuthi amaphesenti amakhulu wabhalisile awazihluphi nangokuchofoza imigqa yezihloko.
Iqiniso ngukuthi, noma kunjalo, ukuthi ukumaketha nge-imeyili kungenye yezindlela eziphumelela kakhulu ukukhomba amakhasimende. Ukumaketha nge-imeyili kuyindlela engcono kakhulu yokwandisa i-ROI, futhi kuvumela abathengisi ukuthi bafinyelele abathengi ngendlela eqondile.
Abathengisi bafuna ukuguqula imikhondo yabo nge-imeyili, kepha abafuni ukuzibeka engcupheni yokubacasula ngemilayezo yabo noma ukubalahlekisela njengababhalisile. Enye yezindlela zokuvimbela lokhu ukufuna i- ukhethe ukungena kabili. Lokhu kusho ukuthi ngemuva kokuthi ababhalisile babhalise ama-imeyili abo nawe, kuzofanela baqinisekise ukubhaliswa kwabo nge-imeyili, njengoba kuboniswe ngezansi:
Ake sibheke izinzuzo nezingozi zokungena kabili, ukuze ukwazi ukunquma ukuthi ingabe zilungele wena nezidingo zebhizinisi lakho.
Uzoba nababhalisile abambalwa, kepha abanekhwalithi ephezulu
Uma usanda kuqala nge-imeyili, ungahle uthande ukugxila kuzinjongo zesikhashana futhi umane ukhulise uhlu lwakho. Ukuzikhethela okukodwa kungaba yindlela engcono kakhulu ngoba abathengisi bahlangabezana ne- Amaphesenti angama-20 kuye kwangama-30 akhula ngokushesha ohlwini lwawo uma badinga kuphela ukungena okukodwa.
Okubi kwalolu hlu olukhulu, olulodwa lokungena kungenxa yokuthi laba akubhalisi bekhwalithi. Ngeke bakwazi ukuvula i-imeyili yakho noma bacindezele ukuthenga imikhiqizo yakho. Ukungena kabili kuqinisekisa ukuthi ababhalisile bakho banentshisekelo yangempela ebhizinisini lakho nokuthi yini okufanele unikele ngayo.
Uzoqeda ababhalisile abakhohlisayo noma abanamaphutha
Umuntu othile uvakashela iwebhusayithi yakho futhi unentshisekelo yokubhalisela uhlu lwakho lwe-imeyili. Kodwa-ke, akayena umuntu othayipha kakhulu noma akanaki, futhi igcina ngokufaka i-imeyili engalungile. Uma ukhokhela ababhalisile bakho, ungalahlekelwa yimali eningi ngama-imeyili abo amabi.
Uma ufuna ukugwema ukuthumela kumakheli we-imeyili angalungile noma ayiphutha, ungakhetha ukungena kabili, noma ufake ibhokisi lokuqinisekisa le-imeyili lapho ubhalisa, njenge-Old Navy, eyenziwe lapha:
Ngenkathi amabhokisi okuqinisekisa ama-imeyili awusizo, awasebenzi ngempumelelo njengokungena kabili uma kukhulunywa ngokukhipha ama-imeyili amabi. Noma kungavamile, omunye umuntu angabhalisela umngani uhlu lwama-imeyili, noma ngabe umngani engazange acele ukungena. Ukungena kabili kuzovumela umngani ukuthi azikhiphe ohlwini lwama-imeyili angafuneki.
Uzodinga ubuchwepheshe obungcono
Ukungena kabili kungabiza kakhulu, noma kudinge ubuchwepheshe obuningi, kuya ngokuthi ukhetha ukuphatha kanjani ukumaketha kwakho kwe-imeyili. Uma wakha ipulatifomu uwedwa, uzodinga ukutshala isikhathi esingeziwe nezinsizakusebenza eqenjini lakho le-IT ukuze bakwazi ukwakha uhlelo oluhle kakhulu. Uma unomhlinzeki we-imeyili, angakukhokhisa ngokuya ngokuthi unababhalisile abangaki noma ama-imeyili owathumelayo.
Kunezingxenyekazi eziningi ze-imeyili laphaya ezingakusiza usebenzise imikhankaso yakho. Uzofuna ukukhetha okuhambisana nezinhloso zakho, onolwazi nezinye izinkampani embonini yakho, futhi ongafanisa isabelomali sakho.
Khumbula: Uma uyibhizinisi elincane, awudingi umhlinzeki wokuthengisa we-imeyili othanda kakhulu, futhi obiza kakhulu. Uzama nje ukusuka phansi, futhi nengxenyekazi yamahhala izokwenzela okwamanje. Kodwa-ke, uma uyinkampani enkulu, futhi ubheke ukwakha ubudlelwano obuzuzisayo namakhasimende, kufanele uthole umhlinzeki ongcono kunabo bonke otholakalayo.
Ingabe usebenzisa ukungena kabili noma okukodwa? Iyiphi inketho esebenza kangcono ebhizinisini lakho? Sazise esigabeni sokuphawula
Tags: ukhethe ukungena kabilii-imeyili yokungena kabiliukungena nge-imeyiliukungena kwezindabaukungena ngemvume
UKylie Ora Lobell
UKylie Ora Lobell ungumbhali ozimele osebenzela eLos Angeles. Ubhala ngokukhangisa kweNewsCred, Convince neConvert, iCMO.com, iSocial Media Examiner, neVertical Response.